ENingizimu-East Asia Socialist Republic of Vietnam. Izikhangibavakashi lokhu ezweni elikude kuthiwa ayiqondakali kahle, kodwa akukho ezithakazelisayo kancane futhi ekhangayo. Izivakashi uza lapha ukuze ujabulele namathafa esiyingqayizivele nobuhle ezinkulu lamathempeli Oriental lasendulo.
Lapho itholakala Socialist Republic of Vietnam, lapho izinto kuthiwa amehlo bayanda izivakashi zakwamanye amazwe?
Isimo itholakala engxenyeni eseningizimu-mpumalanga ye-Asia, enhlonhlweni Indochinese. Kusukela empumalanga it is wageza ngasemanzini efudumele South China Sea, entshonalanga kube elisemngceleni ne Cambodia Laos, futhi enyakatho - ne China. Le ndawo yezwe akuyona okusezingeni eliphezulu (ayizinkulungwane 331,2 amakhilomitha square). Nokho, inabantu abangaphezu kwezigidi ezingu-90.
Vietnam yiyona side kakhulu ohlangothini sub Meridian. Umehluko lokushisa phakathi izifunda yasenyakatho naseningizimu yezwe kwesinye isikhathi ukufinyelela degrees 10-12.
E-Moscow, kukhona embassy Socialist Republic of Vietnam. Itholakala kwi-Grand Pirogov emgwaqweni, indlu 13. Ihhovisi lokhu ezikude emazweni Asian nangokuphila Vladivostok futhi eYekaterinburg.
igama elisemthethweni: Socialist Republic of Vietnam. isimiso sezombangazwe nokuhlukanisa zokuphatha yezwe
Igama lizwe lwasendulo. Ngokokuqala ngqá it is okukhulunywa ngazo encwadini imbongi Khiem, yabhalwa ngekhulu XVI. Geographical endaweni yegama linamagama ezimbili: viet (Viet - impande nabantu eyinhloko Vietnam) kanye nam, okusho "eningizimu", "iningizimu". Igama eliphelele futhi esemthethweni isimo umsindo namuhla imi kanje: Socialist Republic of Vietnam.
Izwe lihlukaniswe izifundazwe 58 futhi emadolobheni amakhulu amahlanu nge isimo nezimiso ezingokomthetho ezifuze. Vietnam - amakhosi ohlanga noma republic? Ngokusho isakhiwo isimo ezweni kuba i-republic. The main (kuphela zomthetho) bezombusazwe isimo ukhonza iCommunist Party of Vietnam. Vietnamese, ngasendleleni, balibiza ngokuthini short sikubeke: iqembu.
Umlando Vietnam Ezemfundo
Kuyaphawuleka ukuthi kuze kube maphakathi nekhulu le-Athazeksesi, State of Vietnam e kwemingcele yayo samanje wayengekho. Kwaphela isikhathi eside, izwe uhlala sincike France. Phakathi neMpi Yezwe II, Vietnam lathunjwa amabutho Japanese. Ngesikhathi esifanayo (August 1945) owaqhutshelwa e Hanoi kuvukela eholwa Ho Shi Mina. umhlangano 500-ngokuqinile lokho ngikweluleke yamemezela ukuthi eningizimu-mpumalanga ye-Asia, isimo esisha ezimele - Democratic Republic of Vietnam.
Nokho, kuleli zwe inkosi Vietnam ayihlalanga isikhathi eside. Njengoba iJapane ngokusemthethweni elahlekile seMpi yoMhlaba yesiBili, amaviyo alo abangu disarmed. Vietnam athatha izwe labakwa-lempi emazweni amaningana - China, iBrithani neFrance. Uhulumeni omusha ka Ho Shi Mina ngemvume ngohlangothi French eziningi izivumelwano, kodwa ngokushesha kwaba sobala ukuthi French uhlose ukubuyisela amalungelo abo ensimini Vietnam. Ekupheleni kuka-1946, i-Vietnam ongene lwesigaba kwempi, eyathatha insimu yalo ngoba cishe engamashumi amathathu.
Ekuqaleni amabutho Ho Shi Mina "baya ihlathi" futhi kulwa engabandlululi kakhulu. Kodwa kamuva bakwazi uyohlala endlini okuhlaselayo asebenzayo. Okubizwa ngokuthi Okokuqala Indochina neMpi kwaphela ngo-1954 lapho kusayinwa umthetho-Geneva Evumelana, okuyinto waqaphela ngokugcwele kutimela isimo abasha.
Ngokushesha waqala esiyindilinga entsha yimpi eVietnam. Isimo eningizimu-mpumalanga ye-Asia, waphula omunye abadlali ezinkulu geopolitical - United States, ngenjongo okwakufanele kukhawulwe ukusabalala imibono wobukhomanisi e-Asia. Ukweseka ngqo baseMelika eningizimu ye-republic kwamiswa South Vietnam , nenhloko-dolobha yalo emzini Saigon. Ngakwelinye ihlangothi, Democratic Republic of Vietnam (DRV), okuyinto besekele eSoviet Union, wanquma ngempoqo ukuze ujoyine emuva ezindaweni wawo oseningizimu. Ngakho, kwi-obuncane izwe lase-Asia, eqinisweni, sahlangana empini samanje, amabili ayizikhondlakhondla zezikhali planethi.
I Vietnam War waqhubeka kwaze kwaba maphakathi nawo-70s. DRV ne basekela amabutho aseSoviet, futhi ngosizo ngezenzo zayo asebenzayo amaqembu yabashokobezi eningizimu yezwe wakwazi ukunqoba le mpi. I ekubumbaneni osekukade iNyakatho neNingizimu, kanye kumiswa Socialist Republic of Vietnam waba ngo-July 1976. City Saigon iqanjwe kabusha Ho Chi Minh City ukuhlonipha oluvelele Umkhuzi Vietnamese.
Socialist Republic of Vietnam ezikhangayo izivakashi ezingaba yezwe
Leli zwe spoilt yizivakashi - lena indlela ungakwazi ukuchaza republic abasha. Kuyini ezikhangayo kuyinto ngaphakathi lo sho? Ngaphezu kwakho konke kuba isimo esingavamile, namathafa ezihlukahlukene, ubungcweti engavamile abayeni Vietnamese ngokwabo.
Inhloko-dolobha ye-Vietnam, Hanoi uzobe nakuyiphi European, ejwayele emadolobheni amakhulu, amapaki ethokomele futhi izakhiwo zesimanje. Kodwa emzini Hue kufanele nakanjani hamba ezithandwa ubudala. Lapha isihambi ihlangana mbhoshongo amahle, IHlalankosi, amanxiwa wezinqaba lasendulo. Kodwa e Ho Chi Minh City (phambilini obuwaziwa ngo Saigon), ungathola ngokugcwele ukunambitheka yasendulo-East Asian edolobheni.
Abathandi izilwane zasendle, kanye okuphumuzayo, iholide obunokuthula, qiniseka ukuthi uvakashela yokungcebeleka entabeni Dalat.
Ho Shi Mina wezindawo zezidumbu
Ho Shi Mina Mausoleum kuyinto e Hanoi futhi limelela izakhiwo eziyinkimbinkimbi, ehlanganisa izinto ezinhlanu. Umholi ngemibono we-Vietnamese, njengoba yaziwa, akazange aphile isikhathi eside aze ubunye ezweni, wona alwa. Ukwakhiwa kwehlelo Mausoleum behlonipha yakhe waqala ngo-1973.
Namuhla, noma ubani angaba ekhuphukela phansi isakhiwo grand yesibili bese nibheka Ho Shi Mina elele ebhokisini lokungcwaba ingilazi. I eziyinkimbinkimbi futhi izindlu kaMongameli Palace nendlu sokhuni umongameli.
Enye indawo eVietnam, okuyinto uthanda bonke izivakashi - iyona delta ka eMfuleni iMekong. Lapha ungakwazi ukuzwa yobuhle balo nokuhlala essence exotic ukuphila lendawo. Bomthombo ka eMfuleni iMekong lapho agelezela kolwandle lwakha amakhulu imikhono emincane. Ukuze Vietnamese kule ndawo njengemikhele Dnieper Ukraine noma Nile kwabaseGibhithe.
Ezinye izivakashi beze lapha usuku noma ezimbili, abanye basale lapha ngesonto ukubhukuda kancane kancane ngokusebenzisa imigudu uphinde uhlole emakhoneni lalinamandla landscape wendawo. Ngo iMekong Delta ukuheha abavakashi izindlu yezakhamuzi zendawo, izimakethe ezintantayo, emasimini ka izithelo ezingavamile, kanye yisiqhingi candies kakhukhunathi wangempela wenziwa.
Dalat futhi entabeni Longbyan
Dalat - lokhu ingenye zokungcebeleka engcono ethandwa kakhulu eVietnam. Kodwa emzini kufanele nakanjani vakashela Mount Longbyan. Kusukela isiqongo zayo inikeza umbono omangalisayo Dalat amagquma elikhanyayo oluhlaza kanye namadlelo.
Le ntaba kuyinto drive ngomzuzu amathathu kusukela yokungcebeleka futhi ine uhlobo uchungechunge iziqongo ezinhlanu mlilo. Ukuphakama eliphakeme wabo 2.400 kwamamitha. On emphemeni observation Longbyana angashiya, kodwa Isiqongo esiphakeme iyatholakala ngezinyawo kuphela.
On the nhlonhlo we Indochina, ogwini South China Sea, itholakala Socialist Republic of Vietnam. Izikhangibavakashi yaleli zwe elihle akuvamile ezishiwo isiqondiso ekuphileni ethandwa. Kodwa ukuthi ngisho nangokwengeziwe izivakashi kanye nabahamba abakulungele yokuthola izinto ezintsha.
amathempeli Lasendulo, imvelo emangalisa, imfudumalo nomoya wokungenisa izihambi ngendlela abantu Vietnamese - nalokho kwenele ke ukuya isimo. Republic of Vietnam ongakabi spoilt yizivakashi, futhi ngenxa yalokho elangazelelwa ngamunye isivakashi yakho.
Coat "Max Mara" - elicwengisiswe isitayela kanye nomklamo eyinkimbinkimbi
I-hard drive esusiwe - okungaphezu kwe-flash drive
Umuthi 'Liarsin "ngoba izinja: yokusetshenziswa, umthamo kanye nokubuyekeza